Raketo an-tsoratra amin'ny Vokoscreen | Avy amin'ny Linux
Raketo an-tsoratra amin'ny Vokoscreen izay zava-mitranga rehetra
Mamaky ao amin'ny G+ Nanaitra ahy ny fangatahana iray nataon'ny orinasa Yoyo Naneho hevitra aho, izay mikendry ny hisambotra sy handrakitra izay rehetra mitranga eo amin'ny efijery informatika.
Momba izany Vokoscreen, rindranasa tena tsotra fa manome safidy isan-karazany amin'ny screencast, satria mamela anay handrakitra ny efijery feno, varavarankely manokana na ny faritra tadiavinay fotsiny.
Faly ny maro fa misy ny kinova Debian, Ubuntu y openSUSE. Azontsika atao ny mitahiry ny horonan-tsary amin'ny endrika .avi na .mkv, manafina ny cursor, manomboka manoratra raha vantany vao mihena ny kely indrindra Vokoscreen, ary alefaso amin'ny horonantsary aza ny horonantsary farany.
Ny binary rehetra dia tafiditra ao anaty fisie izay azontsika sintonina avy amin'ny tranokala ofisialy:
Sintomy ny Vokoscreen
Izaho dia hametraka horonantsary izay nataoko, fa ilay mampihomehy YouTube Mivadika ho volondavenona amiko ny zava-drehetra .. ka tsy misy, izay te hahita azy dia misintona azy eto 😀
Sintomy ny horonan-tsary ohatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Raketo an-tsoratra amin'ny Vokoscreen izay zava-mitranga rehetra
Toa tsara be ilay horonan-tsary noraketinao, hitanao ve ny tsy fitoviana manaitra eo amin'ity rindranasa ity sy ny (qt-) recordmydesktop?
Eny, mbola tsy nanandrana qtrecordmydesktop aho ...
O_O… tsara, mirakitra ny audio mandeha mitovy amin'ilay rafitra ve io? Raha manao an'io izy dia ny mpampiantrano 😀
Nahita izany aho tao amin'ny fiarahamonina Manjaro, mahaliana: 3
Tiako!!!! Mampalahelo fa tsy azoko atao ny mampangina ny mikrô amin'ny programa… Fa fampiharana tsara.
Toa mahaliana ilay izy fa ahoana no hametrahako azy ao amin'ny Fedora? sa mahalala hafa izay ao amin'ny repo Fedora ianao? Azafady, tsy dia fantatro loatra ny momba ny Linux 🙂
azo inoana fa hiasa ho anao ny RPS openSUSE
Pink Linux 2013 dia hoy izy:
Tsy haiko raha misy an'i Rosa
Mamaly an'i Rosa Linux 2013
Tsy nandiso ahy mihitsy i Kazam ary tsy tena nety tamiko ity iray ity 🙁 ankoatry ny fisehoan'ny endrika sary ho somary ratsy tarehy amiko.
Salama Elav. Zavatra tsara, safidy hafa ho an'ny GTKRecordMyDesktop sy Kazaam. Misaotra ny fizarana.
«Offtopic» fanehoan-kevitra. Mampiasa LibreOffice Writer aho, saingy satria manoratra amin'ny fiteny roa aho, matetika ny diksionera, ny tsipelina ary ny fikirakirana interface tsara no milalao amiko. Ka hoy aho anakampo: "Maninona ianao no tsy mametraka Abiword ary mampiasa azy amin'ny fiteny iray, nefa mitahiry ny LibreOffice ho an'ny iray hafa?" Hevitra tsara! Na dia tsy nanana traikefa tsara aza aho tamin'ny fotoana farany nampiasako an'io mpanamboatra teny io ...
Rehefa manandrana mametraka an'i Abiword ao amin'ny Xubuntu 12.10 Software Center, ny ankamaroan'ny hevitra dia ratsy. Gaga! Nisy ny fanehoan-kevitra nilaza fa programa tsara izy io, fa ny kinova miorina (2.8) dia tsy maintsy apetraka satria ilay iray avy amin'ny toerana anaovana tahiry (2.9.2 + svn) no fampandrosoana iray ary manome lesoka maro.
Nikaroka an-tserasera aho ary eny: maro ny mpampiasa tsy faly amin'ny lesoka ao amin'ny repositories Ubuntu. Mampalahelo fa tsy mbola nahita vahaolana aho hatreto. Ary ny tena ratsy indrindra: mpampiasa mimenomenona satria ny lesoka koa dia ao amin'ny fitoeram-bokatra (tsy haiko raha marina izany) an'ny Xfce.
Fantatro fa tsy mampiasa Xfce intsony ianao, fa mifandray hatrany amin'ny ekipa fampandrosoana. Azonao ampitaina aminy ve izany olana izany? Ary raha tsy manontany be loatra ianao (satria tianao ny mahita ny fomba fanamboarana bibikely), azonao atao ve ny manoratra lahatsoratra iray (na manankina izany amin'ny olona iray ao amin'ny ekipa) momba ny fomba fametrahana Abiword 2.8 amin'ny Debian sy ireo derivatives?
Misaotra tamin'ny sainao. 😉
amin-kitsimpo Abiword Na dia tiako tamin'ny fahazavana aza izy dia tsy nampiasa azy io mihitsy satria nanana olana hafa foana aho. Tsy fampiharana ratsy, fa mandeha izy io. LibreOffice Tsy lavorary koa izy io, ao amin'ny Ubuntu 12.04 dia mitranga amiko izao fa, amin'ny ankamaroan'ny masinina any am-piasana izay nametrahako azy dia manome olana izy rehefa manokatra antontan-taratasy izay manana accents sy habaka amin'ny anaran'ny fisie.
Vahaolana? Mampiasà tsara Calligra, inona no mitranga fa somary manaitra ny interface-ny. Heveriko fa tsy lesoka io Xfcefa ny fampiharana apetraka. Na izany na tsy izany dia ho hitako ny zava-mitranga 😀
Toy ny mahazatra, misaotra anao noho ny valin-teninao tamin'ny hevitra nataoko. Ny lesoka dia avy amin'ny tahiry Ubuntu. Anisan'ireo hitako fa novakiako fa ao amin'ny Fedora dia manana kinova 2.8 izy ireo, noho izany ny mpampiasa azy ireo dia tsy manana olana mitovy amin'i Abiword.
Ho an'ny fiainako manokana dia nandinika an'i Calligra aho, saingy satria "suite" birao iray manontolo izay hampiasa ilay teny hoe processeur fotsiny, dia toa tsy safidy mety izany. Izany no antony naniriako niloka tamin'i Abiword.
Ah, zavatra iray hafa novakiako teo, dia toa nilaozana ilay tetikasa. Nandritra ny fotoana kelikely, tsy namoaka kinova vaovao miorina tsara ry zareo. Mampalahelo tokoa. Amin'izao fotoana izao, tsy mitaraina momba ny LibreOffice aho, mbola hanohy hampiasa azy io. Ny zavatra tsy tiako dia ny ketsika sendra ahy isaky ny miova fiteny aho.
Tratry ny faran'ny herinandro ary mifankahita amin'ny manaraka.
mandeha ny fakana feo anatiny, fa mampahafazy azy, ny tiako holazaina dia miadana kokoa ny fiafarany, toy ny kasety taloha.
tinicg dia hoy izy:
Misaotra ny programa 🙂 ny olana mahazo ahy dia ny hafainganana ny horonantsary, tena haingana, ny anao toa marina amin'ny fotoana tena izy, tsy fantatro hoe maninona no ao anaty vombony ...
Mamaly an'i tinicg
Ummm .. Andao andramo jerena ny fomba!
Mamaly an'i elynx
bersil dia hoy izy:
[... atombohy ny fandraisam-peo raha vantany vao ahena ny Vokoscreen ...] raha ny tena izy dia mampihena ny vokoscreen amin'ny fipihana ny bokotra "start", ny zava-mitranga dia diso ny fandikan-teny amin'ny interface interface. Nahitsiko ny fandikan-teny Espaniola sy Italiana ary nalefako tany amin'ny developer, izay hampihatra azy ireo amin'ny prox. kinova.
Na izany na tsy izany, nanangona azy niaraka tamin'ny fanamboarana tafiditra aho ary nanao ny fonosana deba izay azo sintonina avy amin'ity rohy manaraka ity:
Tokony holazaiko fa miasa tsara kokoa noho ny FdesktopRecorder izy ary mifangaro tsara amin'ny KDE, manohana ny mangarahara mangarahara Oxygen-mangarahara mihitsy aza izy.
Mamaly ny bersil
Izy io dia mirakitra tsara ahy na dia somary haingam-pandeha aza izy ary tsy mifanaraka amin'ny feo: S.
Nampiasako ny sasany tamin'ireo fandaharana ireo ary mitovy ny olana hatrizay: efijery volondavenona rehefa mampakatra azy amin'ny youtube.
Misy mahalala ny antony? Mila izany aho hamoronana tutorial.
Fantatrao ve misy safidy hafa amin'ny youtube izay mifanaraka tsara amin'ity programa ity?
guman dia hoy izy:
Mampiasa crunchbang aho ary mamoaka lesoka rehefa mametraka ny fonosana ary raha manandrana amin'ny tahiry aho aorian'ny fanavaozana dia tsy hita ...
Mamaly an'i guman
eliecer aponza dia hoy izy:
ampiasao atube catcher eto ny rohy: http://www.atubecatcher.es/
Mamaly an'i eliecer aponza
Ahoana ny fomba hanokafana sy hanovana ireo sary CMYK ao amin'ny GIMP